Sound nsu, Noise Barrier, Barrier Panel, Highway Walls, Sound Barrier - Jinbiao
Hebei Jinbiao Construction Materials na-tọrọ ntọala na 1986 ọkachamara na mmepụta nke na-ewu ihe. Anyị factory enyene karịa 800,000m2 ebe, na ihe karịrị 400 ndị ọrụ, 40 ọkachamara, aha obodo nke RMB 60.4 nde, na-eru 500 nde yuan nke liquidity.In Shijiazhuang, 26 December 2014, ụlọ ọrụ na e depụtara na ngwaahịa mgbanwe, na-aghọ mbụ mpaghara depụtara ụlọ ọrụ na ebe, nke ngwaahịa na-aha gold ọkọlọtọ ntupu, mkpọtụ mgbochi na aluminum formwork ika.
JINBIAO Company nwere 3 mmepụta osisi tinyere waya ntupu nsu, Sound megidere na Aluminium Formwork. Daily mmepụta ike nwere ike iru 18km nsu, 5000 m2 ụda mgbochi, na 8000 PC H ígwè post. Aluminum Formwork e mere na-emepụta ihe karịrị 10 tent ụlọ kwa ọnwa.
Anyị ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 10 mmepụta edoghi, gụnyere ọnwụ, ịgbado ọkụ, ekwe na ndị ọzọ akpaghị aka mmepụta e. Na 2016 JINBIAO nọrọ 20 nde nnukwu ichekwa ego ịme nnukwu ọhụrụ ngwá maka ngwaahịa elu ịgba ọgwụgwọ.
Anyị na ngwaahịa na-ere ọma ma n'ụlọ na mba ọzọ na àgwà na mma price. dị ka Russia, Singapore, Dubai, United States, Canada, Australia, Japan etc ... Ndien meriwo ọma were site oversea ahịa, na-ekpori a elu aha na ụlọ ọrụ.
Nwa Oge Noise Control Barrier (TNCB)
Na-adịgide adịgide Noise Control Barrier PNCB
Ugboro abụọ waya gbachie
School soundproofing ngere (LRM)
Ike osisi obi jụrụ ụlọ elu now mgbochi
Landscape yi now mgbochi
Communityfactory now mgbochi
Science na nkà na ụzụ, ime ka ndụ jupụtara vitality, a oru ngo na Singapore na anyị na-ahụ di iche iche nke mkpọtụ mgbochi, ọkachamara imewe otu bụ iduga osisi mkpọtụ mgbochi, echiche ọrụ n'ihi na nnukwu ihuenyo n'ime ndụ ha, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na osisi nwere ike, na-eme ka ndị ahịa ọtụtụ afọ ojuju na
East District, Industrial Park, Anping County, Hebei Province, China (Nke 27, Weier Road)